पुलिस बडी क्यामेराको बारेमा जान्नको लागि5चीजहरू OMG समाधानहरू
5 चीजहरू पुलिस बडी क्यामेराहरूको बारेमा जान्न
शरीरमा लगाएका क्यामेराहरू यस जेनेरेसनमा पूर्ण रूपमा नयाँ छैनन्। हामी प्राय: अंगरक्षकहरू र गुप्त अपरेशन एजेन्टहरू सूचनाको लागि यो प्रयोगको लागि देख्छौं। कुनै पनि प्रविधिको साथ जस्तै, पुलिस शरीरले लगाएको क्यामेरा आधुनिक कानून प्रवर्तन एजेन्सीहरूमा एक नयाँ प्रवृत्ति भइरहेको छ। एजेन्सीहरू बिस्तारै आफ्ना कार्यक्रमहरूसँग अगाडि बढ्दै जाँदा उनीहरूले शरीरमा लगाएको क्यामेरा प्रणालीमा आलोचनात्मक रूपमा हेर्नु आवश्यक छ र विश्लेषण गर्नुहोस् कि यदि यो वास्तवमै लायक छ र यसको कार्यान्वयनका लागि औचित्य छ।
जब यस विषयमा जनताको दृष्टिकोण फार्ममा पुग्दछ, यो देखापर्दछ कि उत्तरदायित्व र प्रहरीको पारदर्शितामा बृद्धि भएको छ जब शरीरमा थकित क्यामहरूमा। अध्ययनहरूले देखाए कि व्यवहार र व्यावसायिकता यसको चरम सीमामा देखिएको थियो, यो वास्तवमै नयाँ छैन किनकि यो सामान्य मात्र छ, मानिसहरूले स्वाभाविक रूपमा राम्रो व्यवहार गर्ने झुकाव राख्छन् जब उनीहरू निरन्तर सतर्क रहन्छन् कि उनीहरू निगरानीमा छन्। ती शक्तिको प्रयोगबाट जोगिन देखिन्छ जब अनावश्यक वा अधिक पक्राउ गर्न शक्ति को अधिक प्रयोग बेवास्ता गर्न।
शरीर-लगाउने क्यामेरामा हुँदा एक अधिकारी द्वारा लाभहरू खिन्थे
यो कुनै समाचार छैन कि धेरै कानून प्रवर्तन एजेन्सीहरूले शरीरमा लगाएको क्यामेराको बारेमा विपक्षी दृष्टिकोण राख्दछन्, धेरैले काम गरेको बेलामा यसलाई लगाउने बारेमा असहज महसुस गर्छन्। केहि फाइदाहरू र चिन्ताहरू अवलोकन गरियो:
एक व्यक्तिको वास्तविक दृष्टिकोणको स्पष्ट तस्वीर भएको, यो समस्या हो जब तपाईं दुराचार र कानूनको अनादरको लागि एक गुंडा पक्राउ गर्नुहुन्छ। कहिलेकाँही, यी विशेष दुर्व्यवहार ब्यक्तिहरु एक सूटमा एन्जेलिक पोशाक र साँच्चै शान्त कुराकानी गर्न देखिन्छ। यो वास्तवमै निराश हुन सक्छ तर शरीरमा लगाएको क्यामेराको साथ, देखाइएको भिडियोले सजिलैसँग प्रलोभन वा चेरेडलाई बदनाम गर्न सक्दछ जुन उनीहरूले तान्न प्रयास गरिरहेका हुन सक्छन्। यो धेरै उपयोगी हुन सक्छ जब यो मुद्दा चलाउन को लागी आउँछ।
क्यामेराको पक्षपातपूर्ण प्रकृति, हामी स्वाभाविक रूपमा विश्वास गर्छौं जुन हामीले हाम्रो दुई आँखाले देख्न सक्छौं यो पूर्णतया सामान्य हो। केसको सहायताका लागि भिडियो प्रमाण प्रस्तुत गर्न यो सँधै सजिलो छ, तपाईं त्यहाँ के भइरहेको छ देखाउन जूरी वा न्यायाधीशलाई सडकमा लैजानु पर्छ। जब उनीहरू आफ्नै आँखाले देख्दछन्, निर्णय लिने तिनीहरूको लागि धेरै सजिलो हुन्छ।
शरीरमा लगाएका क्यामेराहरूको परिचयका साथ यो देखिन्छ कि त्यहाँ गुनासो र पुलिस अधिकारीहरुमाथि लगाइएको आरोपमा गम्भीर कमी आएको छ। व्यक्ति अधिक व्यवहार र अनुपालन गर्न को लागी गर्छन विशेष गरी जब तिनीहरूलाई थाहा हुन्छ त्यहाँ उनीहरूको अनुगमन भइरहेको मौका छ।
फौजदारी न्याय कानुनमा कडा कटौती हुने भएकोले अपराधीहरूले एकपटक भिडियो सबूत बजाए पछि आरोपहरूको लागि दोषी मानिन्छ। एकचोटि तपाईं यस कार्यमा फस्नुभयो भने यो सजिलैसँग कसैलाई देखाउन सकिन्छ, यसले सम्भाव्यता वा इच्छुकतालाई कम गर्दछ तपाईंको रक्षा गर्ने कसैले तपाईंको सबै पक्षलाई अन्यथा प्रमाण दिन्छ।
त्यहाँ पुलिसले के रेकर्ड गर्नुपर्दछ भन्ने समस्या जहिले पनि भएको छ र के उनीहरूले सबै कुरा रेकर्ड गर्नु पर्छ? खैर, यो एक प्रमुख समस्या हो, शरीर क्याम्स एक पुलिस अधिकारी बल मा आफ्नो आगमन पछि निर्माण गर्दै छ सम्बन्ध बिगार्न सक्ने सम्भावना छ। यो पनि याद गर्नुपर्दछ कि अपराध दृश्यका साक्षीहरू बेनामी रहन मन पराउँछन् र रेकर्ड हुनबाट जोगिन सबै सम्भव हुन्छ। यस विवेकी केहि, पुलिसलाई विवेक कहिले प्रयोग गर्ने भनेर र मार्गनिर्देशनहरू प्रयोग गर्दछ कि मार्गदर्शन प्रयोग गर्दछ। विवेकका लागि त्यहाँ दुई मुख्य दृष्टिकोणहरू छन्:
एक जना अधिकारीलाई जनतासँग उसको सबै सम्पर्क रेकर्ड गर्न आवश्यक पर्दछ र केवल कलको समयमा मात्र होइन, यो सधैं आवश्यक हुन्छ नागरिकहरूलाई अनौपचारिक कुराकानीसमेत रेकर्ड गर्न पनि। तर केहि कानून अनुसार एक पुलिस अफिसरको रेकर्ड गर्नु आवश्यक छ यसले सर्वसाधारणको गोपनीयतालाई हानी पुर्याइरहेको छ र यसलाई भ्रममा पार्नु गलत हुन सक्छ र अन्तत: गोलीबारी पनि हुन सक्छ।
अर्को कुरा यो छ कि एक अफिसरले आफ्नो क्यामेरा सक्रिय गर्नु पर्ने छ जब उसले उनीहरूको सेवाको लागि कल गर्ने जवाफ दिइरहेको छ। यी सेवाहरूले समावेश गर्न सक्दछ: खोजीहरू, ट्राफिक, गिरफ्तारहरू, स्टपहरू, खोजहरू र सोधपुछ। एक अफिसरको जीवन अपराध दृश्य रेकर्ड गर्नु वास्तवमै सहयोगी हुन सक्छ र कुनै आपराधिक केस द्रुत रूपमा समाधान गर्न सहयोग पुर्‍याउँछ।
विवेक एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो र अवलोकन गर्नै पर्छ, यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ किनकि तपाईं नागरिक गोपनीयताको उल्लंघन गर्न सक्नुहुनेछ र यसले उत्तेजित पार्ने परिणाम दिन सक्छ। घटनाहरू रेकर्ड नगर्नका लागि ध्यान दिन महत्त्वपूर्ण छ; जस्तो कि समय असुरक्षित, अव्यावहारिक वा असम्भव पनि हुन सक्छ। यसकोलागि, अधिकारीहरूले कागजातहरू लेख्नु किन आवश्यक छ किन उनीहरू आफ्नो शरीरमा लगाउने क्यामेरा बन्द गर्दछन्।
शरीरमा लगाएका क्यामेराहरू भएकोले, उनीहरूलाई अनुहार पहिचान टेक्नोलोजी प्रयोगको लागि मुद्दामा संलग्न व्यक्तिको पहिचान गर्नको लागि पर्याप्त अवसर प्रदान गरेको छ। यस क्यामेराको प्रयोगले अफिसरलाई उनीहरूको वरपर रेकर्ड गर्न अनुमति दिन्छ, उनीहरूसँग कानूनी अधिकार छ। ध्यान केन्द्रित गर्न अर्को अंश, यी फुटेजहरू कहिलेसम्म राख्न, प्रयोग गर्न, भण्डारण गर्न वा सन्दर्भ गर्न सकिन्छ। यसले तिनीहरूलाई पहिचान र गैर-दृश्य फुटेजमा विभाजित गर्दछ। पहिलेको मतलब भनेको फुटेज जुन अनुसन्धान उद्देश्यका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ जबकि पछिल्लोमा फुटेजको कुनै मूल्य हुँदैन वा अन्वेषणको साथ सम्बन्ध छैन, त्यसैले तिनीहरू बेकार हुन्। यो तथ्यलाई ध्यान दिनु आवश्यक छ कि एक अधिकारीले एक संदिग्ध व्यक्तिसँग सोधपुछ रेकर्ड गर्न सक्छ, तर सडकमा कुनै नागरिकसँग सोधपुछ रेकर्ड गर्नु गलत हुनेछ। यो पत्राचार हो र यी लाइनहरू पार गर्नु हुँदैन.
यो याद गर्नु राम्रो छ कि शरीरमा लगाएका क्यामहरूले धेरै फाइदाहरू पाउँदछन्, तर यो पनि याद गर्नुपर्दछ कि पुलिस अधिकारीहरूलाई प्रशिक्षण दिनुपर्दछ र कहिले र कहाँ प्रयोग गर्ने र कसरी यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर पनि उनीहरूले प्रशिक्षण दिनुपर्दछ। विवेकीको महत्त्वलाई बढी मात्रामा लिन सकिदैन।
अदालतका केसहरूमा खर्च गर्नु पर्ने धेरै पैसा बचत गरिएको छ, फुटेजमा चीजहरू हेर्न र अदालतको सत्र समावेशीकरण रोक्न यो सँधै सजिलो हुन्छ। अनुसन्धानकर्ताहरूले डीसी र डीसी मेट्रोपोलिटन प्रहरी विभागको प्रयोगशालाको नेतृत्वमा गरिएको अध्ययनमा अधिकारीहरूले शरीरमा लगाउने क्यामेराको उपस्थितिले वास्तवमा ठूलो असर पारेको छ कि छैन भनेर जाँचे। तिनीहरूले देखे कि शरीरमा लगाएका क्यामेरा भएका अधिकारीहरू अदालतका मुद्दामा बढी संलग्न थिए तर त्यहाँ धेरै अनिश्चितताहरू थिए किनकि उनीहरूलाई न्यायिक नतिजामा पहुँच अस्वीकार गरिएको थियो।
5 चीजहरू पुलिस बडी क्यामेराहरूको बारेमा जान्न पछिल्लो पटक परिमार्जित गरिएको थियो: अक्टोबर 9th, 2019 by व्यवस्थापक
3656 कुल दृश्यहरू 1 हेराइ आज
↳ BWC095-WF - WIFI GPS प्रत्यक्ष स्ट्रीमिंग बॉडी क्यामेरा (हटाउन योग्य ब्याट्री)
↳ BWC097-WF4G - OMG Android Wifi 3G / 4G दुई तर्फी रेडियो क्यामेराको साथ ब्लुटुथ वाकी टाकी
↳ सिंगापुरको शीर्ष पुलिस बडी कपडा क्यामेरा वितरक